Su'aal: Muddo ayaan isku arki jiray nabar?
Author Topic: Su'aal: Muddo ayaan isku arki jiray nabar? (Read 1331 times)
« on: August 02, 2016, 05:28:08 PM »
marka waxan salaamaya dhakhaatiirta nooso gudbisa ama nasiisa talooyinka caafimaad.
salaan ka dib waxan doonayaa in aan halkan kusoo bandhigo su'aal caafimaad oo aan u baahaney in layga caawiyo.
mudo ayaan isku arki jiray nabar ku ag yaala daloolka dabada agtiisa oo leh dheecan marna dhiig iyo cuncun igu sameeya oo marka uu dheecaan kaasi debada usoo baxo ama iga dilaaco waxan noqdaa si caadi ah ayaan dareema marka uu dhexda istaagona cuncun iyo raaxo daro mudo ayay sidaasi jirta.
waxaan u haysan jiray in uu yahay babasiir laakin cashar aan ka daawaday page-kan somalidoc waxan ku ogaaday in aanu ahayn babaasiir ee uu yahay exactly wax aad ku sheegteen anal abscess, marka waxa aan u baaney sida aan iskaga daweyn karo gaar ahaan hadii ay jirto farsamo dabiici ah oo cafimaad ahaan la ogolyey madaama ay tahay meesha aan ka cabanaya meel laga xishoodo in dhakhtar eego?
Re: Su'aal: Muddo ayaan isku arki jiray nabar?
« Reply #1 on: October 01, 2016, 03:24:45 PM »
Waxaa lagu xalin karaa qalliin fudud oo aan dhib lahayn, laakiin waa inuu ku qalaa qof khibrad u lhe qalliinka noocaas si aysan Fistula kugu dhicin, haddiiba aysan hadda jirin.
Views: 15194 April 26, 2011, 06:57:47 PM
Views: 32911 October 16, 2011, 04:39:29 AM
Views: 30754 July 05, 2015, 10:14:33 AM